सन्दिप फेरी महँगो सावित, कप्तान मोर्गनले दिए १ ओभर मात्र बलिङ्ग – WicketNepal
सन्दिप फेरी महँगो सावित, कप्तान मोर्गनले दिए १ ओभर मात्र बलिङ्ग
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ मंसिर १४, शुक्रबार १८:१७
विकेटनेपाल, मङ्सिर १४
युएईमा जारि टि-१० लिग अन्तर्गत अन्तिम खेलमा बेङ्गाल टाइगर्ससंगको खेलमा पुनः नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछाने महँगो सावित भएका छन्।
सारजाह मैदानमा जारी खेलमा टस जितेर फिल्डिंग रोजेपछि जारि खेलको पहिलो इनिंग सकिदा बेङ्गाल टाइगर्सले निर्धारित १० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १२३ रन बनाएको छ।
बेङ्गालको ब्याटिंगमा ओपनर सुनिल नारायणले विस्फोटक इनिंग खेल्दै अर्धशतक प्रहार गरे जुन क्रममा ५२ रन बनाउन मात्र २५ बलमा ४ छक्का र ४ वटै चौका प्रहार गरे। यस्तै शरफेन रुथरफोर्डले ३९ रन ( १७ बल, ४ चौका र ३ छक्का ) बनाए।
केरलाको बलिङ्गमा वायन पार्नेल र बेन्नी होवेलले २/२ विकेट तथा सोहेल तन्बिरले १ विकेट लिए।
सन्दिप फेरी महँगो,सावित हुँदा १ ओभर बलिङ्ग गर्न पाए
प्रतियोगिताको पछिल्लो खेलमा निकै महँगो सावितमा नर्थर्न वारियर्ससंग २ ओभरमा ४७ रन खर्चदै निकै महँगो सावित भएका सन्दिपले दोश्रो ओभरमा पनि उस्तै नतिजा बेहोरे। सुरुवाती खेलमा जस्तो लाइन र लेन्थमा निरन्तरता दिन नसक्दा सन्दिप निरिह सावित हुन पुगे।
पहिलो ओभरमा सन्दिपले कमजोर बलिङ्ग गरेपछि कप्तान ओएन मोर्गनले उनलाई दोश्रो ओभर बलिङ्गमा ल्याएनन्। प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेलमा पुरा २ ओभर बलिङ्ग गरेका सन्दिपलाई पहिलो पटक दोश्रो ओभर बलिङ्ग गर्न नदिईएको हो।
सन्दिपको ओभर बिस्तृतमा-
१.१- लामिछाने – नारायण = वाइड , १.१- लामिछाने – नारायण = डट बल
१.२ – लामिछाने – नारायण = वाइड, १.२ – लामिछाने – नारायण = छक्का !
१.३ – लामिछाने – नारायण = छक्का ! , १.४– लामिछाने – नारायण = डट बल
१.५– लामिछाने – नारायण = डट बल , १.६– लामिछाने – नारायण = छक्का !
कमजोर प्रदर्शनको क्रममा कमेन्टेटरहरुले पछिल्लो खेलपछि सन्दिपले आत्मबिश्वास गुमाएको बताएका थिए। सानै उमेर भएकोले सिक्ने कुरा धेरै भएको र लेग स्पिन गर्न सजिलो नभएको कमेन्टेटरले बलिङ्गको क्रममा बताए। यस्तै एक कमेन्टेटरले सन्दिपले गुड लेन्थमा बलिङ्ग गर्न चुकेको बताएका थिए।
जारि खेलमा जित हात पारे पनि केरलाको दोश्रो चरण पुग्ने सम्भावना यस अघिनै सकिएको छ।
बिहिबार जित्नै पर्ने खेलमा नर्थर्न वारियर्ससंग ८ विकेटले सजिलै पराजित भएपछि केरलाको प्ले-अफ चरण पुग्ने सम्भावना सकिएको हो। उक्त खेलमा सन्दिपले आफ्नो करियरकै सबैभन्दा महँगो स्पेल ( २-०-४७-० ) गर्दा पहिले ब्याटिंग गर्दै केरलाले दिएको १०२ रनको लक्ष्य वरियर्सले ७.२ ओभरमै पुरा गरेको थियो।
यस अघि सन्दिपको टिमले लिगको पहिलो खेलमा शहिद अफ्रिदी कप्तानीको टिम पख्तुन्सलाई ८ विकेटले पराजित गरेपछि दोश्रो खेलमा शेन वाट्सन कप्तानीको सिन्धिजसंग भने नाइट्स ९ विकेटले पराजित हुन पुग्यो। यस्तै आइतवार सम्पन्न तेस्रो खेल भने बर्षाका कारण रद्ध भएको थियो भने चौथो खेलमा पन्जाबी लेजेन्ड्ससंग ३६ रनले पराजित भएको थियो।
अर्कोतर्फ प्ले अफ चरण सुरक्षित गर्न बेङ्गाललाई पनि आज केरलासंग जित महत्वपूर्ण रहेको छ। ५ खेल खेल्दा टाइगर्सले ३ जित र २ हार बेहोरेको छ। यो खेल जितेमा टाइगर्सको प्ले-अफ चरण प्रवेश निश्चित हुनेछ भने हारेको खण्डमा अन्य टिमको नतिजामा आगामी यात्रा निर्भर गर्नेछ। हाल सम्म ४-४ वटा जित सहित ड्यारेन स्यामी कप्तानीको नर्थर्न वारियर्स र शहिद अफ्रिदी कप्तानीको पख्तुन्सले भने प्लेअफमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ।
टि-१० लिग अन्तर्गत पहिलो खेलमा टाइगर्सले नर्थर्न वारियर्सलाई ३६ रनले पराजित गरेको थियो भने दोश्रो खेलमा मराठा अरबियन्ससंग ९ विकेटले पराजित भएको थियो। त्यसपछि तेश्रो खेलमा पन्जाबी लेजेन्ड्स बिरुद्ध ६ विकेटको जित निकालेको टाइगर्सले चौथो खेलमा पख्तुन्ससंग ७ विकेटको हार बेहोरेको थियो। पाँचौ खेलमा भने वारियर्सले सिन्धिजलाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो।
साम बिलिंग्स कप्तानीको टाइगर्समा जेसन रोय, सुनिल नारायन, मोहम्मद नबि, लुक राइट, मोर्ने मोर्केल, मुजिब उर् रहमान, चिराग सुरी जस्ता खेलाडीहरु रहेका छन्।
प्रतियोगितामा हालसम्म सन्दिपको प्रदर्शन
नर्थर्न वारियर्स बिरुद्ध २ ओभर बलिङ्ग गर्दा सन्दिपलाई निकोलस पुरन र आन्द्रे रसेलले कुल ७ छक्का हिर्काए र उनले कुल ४७ रन खर्चिए। पहिलो ओभरमा उनलाई निकोलस पुरनले ३ छक्का हिर्काए जसपछि दोश्रो ओभर बलिङ्ग गर्न आएका सन्दिपलाई आन्द्रे रसेलले ३ छक्का र पुरनले १ छक्का प्रहार गर्दै निरिह सावित गरे।
कसिलो बलिङ्ग गर्नको लागि चिनिने सन्दिपले २३.५ प्रतिओभर रन दिए जुन उनले हालसम्म नेपाल राष्ट्रिय टिम, नेपाली घरेलु क्रिकेट, यु-१९ टिम र अन्य बिदेशी लिगमा बलिङ्ग गर्दा दिएको सबैभन्दा धेरै प्रतिओभर रन हो।